Ogaden News Agency (ONA) – Duufaanka Irma oo Dad Ku Dilay Jasiirado Dhaca Kaariibiyaanka.
Duufaanka Irma oo Dad Ku Dilay Jasiirado Dhaca Kaariibiyaanka.
Posted by ONA Admin	/ September 8, 2017
Ugu yaraan 7 qof ayaa duufaanta Irma ku dishey Jasiiradda Saint Martin ee u qaybsan Faransiiska iyo Holland, waxaana biyaha iyo dabayluhu qaateen 90% jasiiradaha dhaca badda kaariibiyaanka (Caribbean sea)
Jasiiradda kale ee Maraykanka hoostagta ee Puerto Rico ayaa roobab laxaad leh iyo dabaylo ay waxyeelo ka gaysteen. Dad ka badan hal Milyan oo qof ayaan haysan koronto iyo biyo. Afhayeenka Jasiiradaha dhaca Kaaribiyaanka ee Guadeloupe Mr Eric Maire, ayaa sheegaya ilaa hadda in ay diiwaan galiyeen dhimashada 7 qof, laakiin tiradu intaas ka badan karto.
Duufaanta Irma ayaa ah mid aad u xoog badan, waxaana culimada saadaasha hawadu sheegayaan in halkii saac ay jarayso masaafo dhan 295km, taas oo ah middii ugu xooga badneyd ee Jasiiradahaa badda Kaaribiyanka garaacda. Duufaanta Irma ayaa lagu wadaa in ay maalinta Axadda ah gaarto gobolka Florida ee Koonfur Bari Maraykanka.